Iiraan oo daldashay weriye lagu eedeeyay inuu gudbiyay fariimo kicin ah - Home somali news leader
Home NEWS Iiraan oo daldashay weriye lagu eedeeyay inuu gudbiyay fariimo kicin ah
Iiraan oo daldashay weriye lagu eedeeyay inuu gudbiyay fariimo kicin ah
Wararka ka imanaya dalka Iiraan ayaa sheegaya in weriye lagu eedeeyay in barnaamij dadku ay farriimaha isugu diraan uu u isticmaalay in mucaaradad uu ku kiciyo.
Hase yeeshee lama oga sida lagu xiray Zaam oo musaafuris ugu noolaa waddanka Faransiiska. Waxaa lagu soo warramay in la qabtay kaddib mar uu sanadkii la soo dhaafay u safray waddanka Ciraaq.
Shabakaddaas oo ay raacaan in ka badan hal milyan oo qof oo ku xiran bartooda barnaamijka Telegram, ayaa waxa ay dadka la wadaagaysay muuqaallada dibadbaxyada iyo xog waxyeelo gaysan karta oo ku saabsan saraakiisha Iiraan.
Waxaa bartaas xitay dowladda Iiraan, hasayeeshee markii dambe ayaa dib loogu furay magac kale. Zam oo ah wiil uu dhalay wadaadka isbadal doonka ah ee Maxamed Cali Zam, ayaa horaantii sanadkan waxaa lagu helay “musuqmaasuq baahsan” kaasi oo ah mid ka mid ah dambiyada ugu culus ee dalka soo mara.
Previous articleGuddoomiyaha Mursal oo ku celiyay in baarlamaanka uu sii shaqeynayo inta laga dooranayo baarlamaan cusub
Next articleDozens arrested in new Paris protest against security law